Mashandisiro eApple Watch kutora pikicha neiyo iPhone | IPhone nhau
Chokwadi vazhinji venyu munotoziva kuti iPhone kamera inoshanda sei uye kuti tinogona kutora pikicha yakanangana neApple Watch, asi unogona kusaziva sarudzo iyo inotibvumidza kuti tishandure kamera kana kusarudza imwe nzira kubva pawachi pachayo.
Iri basa rinouya rinobatsira kana tichida kutora pikicha pasina kusiya iyo iPhone kune chero munhu, tinogona kushandisa iyo timer, kuzvimisikidza isu zvakanaka uye kutora iyo pikicha. Isu tinogona zvakare kunongedza zvakananga neiyo zoom tichishandisa iyo digital korona uye zvese pasina kubata iyo iPhoneEhe, iyo nzvimbo iri pakati peApple Watch neiyo iPhone inofanirwa kunge ingangoita gumi metres kuti ishande.
Kutora pikicha kuri nyore uye zvine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe wevaya varipo vakatotora imwe (kusiya shamwari dzichifadzwa) nekusiya iyo iPhone ichizorora patafura uye ichitora iyo neApple Watch. Asi chinhu hachigare mune izvi chete uye tinogona kushandisa zvimwe sarudzo dziripo mukati meApple Watch kamera application pachayo.
Chinja kamera kana sarudza imwe nzira
Izvi zvinogona kuitwa zvirinyore kubva kuApple Watch patinodzvanya wachi yekutarisa zvakanyanya. Kana isu tine application kuvhurwa uye isu tatoona iwo mufananidzo watinogona tinya nesimba pachiratidziri uye pinda imwe yesarudzo dzakasiyana iyo inopa:
Kuchinja makamera, kumisa kana kudzima mwenje, kushandisa HDR modhi kana kumisikidza Rarama ndedzimwe sarudzo dzatinadzo. Tinogona zvakare kugadzirisa zoom kuburikidza nekorona yedhijitari uye nekuona iwo mafoto zvakananga kubva kuApple Tarisa mifananidzo app. Kushandisa iyo-yega-timer zvinoreva kutora kuputika kwemifananidzo gumi uye kana zvasvika kuboka pikicha hapana mubvunzo sarudzo yakanakisa. Wati watoedza nzira iyi kutora mifananidzo yako uchisiya iyo iPhone kure nemaoko ako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mashandisiro aungaita Apple Watch kutora pikicha ine iPhone